ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ကျွတ်ရသလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမေရိကန်အရေပြားဆိုင်ရာအဖွဲ့က အမေရိကမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး သန်း ၈၀ လောက်မှာ မွေးရာပါအမွေးကျဲပါးတဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါက ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ပဲကျွတ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ကိုယ်လုံးကအမွေးတွေနဲ့လည်း ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဆံပင် ဘယ်လောက်ကျွတ်လဲဆိုတာကို ရေတွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်၊ ဘီးဖြီးပြီးချိန်တွေမှာ ပုံမှန်ထက် ဆံပင်တွေ အများကြီး ပိုပြီးကျွတ်တာကို သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆံပင်ကျဲပါးနေတဲ့နေရာတွေ၊ ထိပ်ပြောင်တာတွေကိုလည်း သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဆံပင်တွေ အရမ်းကျွတ်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
>> အမျိုးသားများတွင် ဆံပင်ကျွတ်၊ ခေါင်းပြောင်သောပုံစံ
အသက် ၅၀ ကျော်အမျိုးသား 50% ကျော်လောက်က ထိပ်ပြောင်ခြင်းကို ခံစားကြရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင် -
1. Alopecia Areata - ဒါကတော့ ဆံပင်တွေကို အဝိုင်းလိုက်ကျွတ်စေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်တိုက်တဲ့ခုခံအားရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
2. သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းခြင်း - ဆဲလ်တွေက စွမ်းအင်တွေကို သုံးစွဲရာမှာ ထိန်းချုပ်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကို သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက ထုတ်ပေးပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အထွက်နည်းတာကို သိုင်းရွိုက်ဂလင်း တက်ကြွမှုနည်းတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
3. အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း - ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီး လိုအပ်သလောက် အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်မယူနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ အာဟာရချို့တဲ့လာပါတယ်။
4. သိုင်းရွိုက်ဂလင်းတက်ကြွလွန်းခြင်း - သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ လိုတာထက်ပိုပြီး ထွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
5. ယာယီစိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း - ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်မှာ ခံစားရလေ့ရှိပြီး တစ်လလောက်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
6. Lichen Planus - ဒါကတော့ မကူးစက်တတ်တဲ့ အရေပြားအကွက်ထခြင်းရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ ပါးစပ်မှာ ပူစပ်ပူလောင်နဲ့ အဖြူရောင်အဖတ်များဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
7. Hodgkin’s Disease - သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
8. ပစ်ကျူထရီဂလင်း တက်ကြွမှုနည်းခြင်း - ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ pituitary gland က သူထုတ်သင့်တဲ့ဟော်မုန်းပမာဏ မထုတ်နိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
9. ဆစ်ဖလစ် - ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
10. Hashimoto’s Disease - သိုင်းရွိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းကြီးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
11. SLE အရေပြားလေးဖက်နာ - အလွန်အမင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနဲ့ အဆစ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ နာတာရှည် ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြန်တိုက်တဲ့ခုခံအားရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
12. Addison’s Disease – adrenal glands က cortisol နဲ့ aldosterone လို့ခေါ်တဲ့ steroid ဟော်မုန်းတွေကို အလုံအလောက် ထုတ်မပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
13. Systemic Sclerosis - ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်က ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်တိုက်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
14. အူမကြီးရောဂါ - Gluten ကို ပုံမမှန်တဲ့တုန့်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစာခြေပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
15. အစားထိုးထားတဲ့ဆဲလ်နဲ့ မူရင်းဆဲလ်ကြားမှာ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခြင်း - ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးရာမှာ အလှူရှင်နဲ့ လက်ခံတဲ့သူမတူရင် ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
16. Ito Syndrome - အချို့သော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အရေပြားအရောင်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ဖြစ်စေတဲ့ ရှားပါးရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
17. Leishmaniasis - Leishmania လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
18. Bamboo Hair - ဆံပင်တွေက အစုလိုက်ပေါက်နေပြီးတော့ ဝါးရိုးအတွင်းက အစည်းလေးတွေနဲ့ တူပါတယ်။